सामाजिक मिडिया वा टिभी मार्केटिंग? Semalt विशेषज्ञ तपाइँको व्यवसाय को लागी के उत्तम हो व्याख्या गर्दछ
सामाजिक मिडिया O मार्केटिंग टिभी? Semalt Esperto Spiega Ciò Che È Meglio Per Il Tuo Business
विगतमा गरेजस्तै टिभी हेर्दै गरेको व्यक्तिहरू भेट्टाउन यो विरलै छ। युवा डेमोग्राफिकले सामग्री स्ट्रिम गर्न वा तिनीहरूको फोनबाट कास्ट गर्न टेलिभिजन प्रयोग गर्न बढी सजिलो महसुस गर्दछ। कारण केवल यो छ कि उनीहरू अब नेटवर्क वा केबल प्रोग्रामिंग विज्ञापन को साथ हेर्न पनी हेर्न चाहँदैनन्।
इभान कोनोवालोभ, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, टिभी र सामाजिक मिडिया मार्केटिंग बीच मूल्यवान भिन्नता साझा।
टिभी विज्ञापन र डोरी काट्ने
थोरै मानिसहरु टेलिभिजन मा के हुन्छ मा चासो देखिन्छ। स्मार्टफोनहरू यति सामान्य रूपमा प्रयोग भइसकेका छ कि टेलिभिजन खुला हुँदा पनि ध्यान नदिन जान्छ। स्मार्टफोनहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको फोनमा हेर्ने मौका दिन्छ। जब टेलिभिजनले विज्ञापन प्रसारित गर्न सुरू गर्दछ, यो धेरै नै सम्भावना हुन्छ कि प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूलाई स्विच अफ, स्ट्रिमिंग सेवामा परिवर्तन गर्ने, वा उनीहरूको मोबाइल फोनहरूमा परिवर्तन गर्दछ।
प्रिन्ट मिडियाले रेडियोहरूलाई जन्म दिए जुन टेलिभिजनमा वृद्धि भयो। प्रत्येक चरणमा, मान्छेहरूले सोचे कि प्रत्येक आविष्कारले पूर्ववर्तीलाई कमजोर बनाउँछ। यद्यपि, सामाजिक मीडियाको उदयले टेलिभिजनको आवश्यकतालाई पूरै मेटाएको छैन। सामाजिक मिडिया भारी टेलीभिजन उद्योग मा काटिरहेको छ, परिणामस्वरूप डिजिटल मा एक प्रतिमान परिवर्तन।
डिजिटल बनाम टिभी ग्रोथ
गत वर्ष डिजिटल खर्चले spending२.० billion अर्ब डलरको साथ टिभीको विज्ञापन खर्चलाई क्रमशः .2१.२ billion अर्ब डलरमा पारे EMarketer अनुसार, डिजिटल खर्च एक वर्षको साथ अनुभव गर्न को लागी १० अर्ब डलरको बर्षको TV को तुलनामा २ अर्ब डलरको तुलनामा बृद्धि भएको छ।
दुई माध्यमहरू बीचको लिंक यो हो कि ती दुवै बढ्दै छन्। जे होस्, डिजिटल मिडिया अधिक प्राथमिकता लिन्छ। उपकरणहरूमा स्ट्रिम गरिएको सामग्री सामान्यतया टिभीमा सुरू हुन्छ तर स्ट्रिमि service सेवामा थप राजस्वको स्रोतको रूपमा समाप्त हुन्छ।
डिजिटलमा विज्ञापनदाताहरु द्वारा सिफ्ट
एडिडासका मुख्य कार्यकारी कास्पर रोर्स्टेडले आफ्नो युवा उपभोक्ताहरू कसरी मोबाइल उपकरणहरूमा उनीहरूसँग बढी संलग्न हुन्छन् भन्ने कुरा सीएनबीसीलाई बताएर डिजिटलमा सर्दै छन् भन्ने शंकाको पुष्टि गरे। डिजिटल सment्लग्नता, त्यसैले तिनीहरूका लागि मूल्यवान स्रोतको रूपमा काम गर्दछ। एडिडासले यसको परिणाम स्वरूप आगामी चार बर्षमा डिजिटल खर्च बढाउने निर्णय गर्यो। सफल हुने एक तरिकाहरू मध्ये एउटा आकर्षक सामग्री सिर्जना गर्नु जुन प्रयोगकर्ताहरूले सम्बन्धित गर्न सक्दछन्।
यद्यपि टाको बेल जस्ता अन्य कम्पनीहरूले रेडियो र टेलिभिजनमा बदल्दै यस प्रवृत्तिको बिरूद्ध काम गरिरहेको देखिन्छ। अभियानसँगको वार्तालापमा एसएमओ मारिसा थाल्बर्गले भने कि कम्पनीले उनीहरूको डिजिटल मार्केटिंग अभियानको साथ बिरोधात्मक नतिजाहरुको अनुभव गरे, निर्धारित लक्ष्य पूरा नगरिएको दाबी गरे। यद्यपि तिनीहरू प्रवृत्तिको बिरूद्ध जाँदैछन् जस्तो देखिन्छ, यसले उनीहरूको लागि व्यवसाय अवसरको रूपमा काम गर्दछ, विशेष गरी पुरानो ग्राहक आधारका लागि नयाँ बजारको रूपमा।
एक विशाल राजस्व सफलता ग्यारेन्टी छैन, र सही सामग्री बिना डिजिटल मा सबै लगानी राख्नु एक ठूलो गल्ती हो।
अनुकूल वा मर्न: प्रश्नमा फुर्ती
प्रदान गरिएको छ कि डिजिटल मार्केटरहरूले यसलाई सही तरीकाले गर्छन्, त्यहाँ बृद्धिको ठूलो सम्भावना छ। तथ्या .्कले संकेत गर्दछ कि जो व्यक्ति आफ्नो अभियानको शीर्षमा डिजिटल मार्केटिंग राख्छन् उनीहरूले अन्य परम्परागत विधिहरूको तुलनामा राम्रो प्रतिफल र रेकर्ड समयमा अनुभव गर्दछन्। त्यसो भएमा, यसले मात्र कार्य गर्दछ यदि यी व्यक्तिहरूले विशिष्ट सामग्री सिर्जना गर्दछ, जसले ग्राहकलाई यसको प्रासंगिकताको कारण संलग्न गर्दछ, र यो उपकरणमा उपलब्ध गराउँदछ जुन लक्षित दर्शकहरूको ध्यान राख्दछ।
मार्केटरहरूले सोशल मीडियालाई ग्राहकहरूसँग संलग्नताको लागि उत्तम अवसर फेला पार्दछ। यो पनि एक ग्राहक आधार प्रदान गर्दछ विज्ञापन को भुक्तान गर्न को लागी अप्ट गर्न। यदि एक बजारले यी अवसरहरू पहिचान गर्न असमर्थ भयो भने, तिनीहरूले सम्भावित सिसा मात्र गुमाउँदछन् तर उनीहरूलाई पहिलो स्थानमा भेट्टाउने छैन।